Leon’ny fitokonan’ny Seces ny mpianatra: niafara tamin’ny fahamaizan’ny tanety ny fandoroana kodiarana | NewsMada
Leon’ny fitokonan’ny Seces ny mpianatra: niafara tamin’ny fahamaizan’ny tanety ny fandoroana kodiarana
Nirehitra hatramin’ny tanety vokatry ny fandoroana kodiarana nataon’ny mpianatry ny Anjerimanontolo, omaly, teny Ankatso. Leo noho ny tsy fahafahany mianatra izy ireo vokatry ny fitokonana ataon’ny mpampianatra mpikaroka ka naneho ny tsy fahafaliany…
Naneho ny tsy fahafaliana ireo mpianatra tsy mankasitra ny fitokonan’ireo mpampianatra mivondrona ao amin’ny Seces. Raha ny zava-nisy, omaly, teny amin’ny fiantsonan’ny taxi-be, nandoro kodiarana teo amin’ny fiantsonan’ny taxi-be ireo mpianatra. Raikitra ny kiririoka narahina fandorana kodiarana, toy ny fahita mahazatra rehefa fitakiana eny amin’ny Anjerimanontolo. Nalaky anefa ny fiitaran’ny afo ka niitatra nahazo ireo tanety teny amin’ny manodidina ny fiantsonan’ny taxi-be izany. Nijoalajoala ny afo teny amin’ny manodidina an’Ankatso, omaly. Soa ihany fa nalaky tonga ny mpitandro filaminana niezaka nifehy ny afo teny amin’ny manodidina sy nandamina ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana. Na teo aza anefa izany, tsy nisy kosa ny fanimban-javatra fa tao anatin’ny filaminana ireo mpianatra no naneho ny hatezerany.
Mitohy ny tolona…, hoy ny Seces
Raha ny zava-nisy teny Ankatso, omaly, mbola mikatona ny vavahadibe miditra eny amin’ny Anjerimanontolo ary tsy mbola nanohy ny fampianarana ireo mpampianatra manao fitokonana. Nambaran’ny filohan’ny Seces, i Sammy Grégroire fa mitohy ny tolon’ny Seces ary miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijery ity olan’ny mpampianatra mpikaroka ity. “Miroso amin’ny fampianarana izahay rehefa voavahan’ny fanjakana ny olana. Hetsika am-pilaminana no ataonay”, hoy izy. Nilaza hanala ny sorabaventy mipetaka eo amin’ny vavahadibe miditra eny Ankatso ireo mpampianatra rehefa voavahan’ny fanjakana ny fitakian’izy ireo. Tetsy an-kilany anefa, tezitra ireo mpianatra satria lany saran-dalana miala maraina any an-trano handeha hamonjy fianarana kanefa ireo mpampianatra tsy mety hampianatra ka izao niafara tamin’ny fandorana kodiarana izao. Mitaintaina noho izany koa ireo ray aman-drenin’ny mpianatra. “Tsy misy idiranay mpianatra ny fitakiana ataon’ireo mpampianatra ireo fa ny zavatra takinay dia hoe mila mianatra ary te hianatra izahay. Tokony hojeren’ny fanjakana koa ny fitakian’ireo mpampianatra ireo satria misy fiantraikany aty aminay mpianatra izany”, hoy ny solontenan’ireo mpianatra naneho ny tsy fahafaliany teny Ankatso. Olana saro-bahana ary tsy mety ho voavaha mihitsy ity olan’ny mpianatra sy ny mpampianatra eny amin’ny oniversite ity. Mifandimby manao fitokonana na ny mpianatra na ny mpampianatra. Zary efa mahazatra aza izany ho an’ireo mpianatra rehetra nandalo teny amin’ny oniversite.